देउवालाई गगनको प्रश्न : कक्षा १२ को परीक्षामात्रै स्थगित किन ? « Deshko News
देउवालाई गगनको प्रश्न : कक्षा १२ को परीक्षामात्रै स्थगित किन ?
त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा सह नियन्त्रक घनश्याम ठाकुरले अहिले सञ्चालन भई आएका परीक्षाहरू यथावत् सञ्चालन गरिने बताए । उनका अनुसार स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विभिन्न संकायका परीक्षा हाल सञ्चालनमा छन् । केही परीक्षा भने साउन २६ गतेदेखि सुरू हुने उनको भनाइ छ । उसो त ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा समेत त्रिविको परीक्षा स्थगित गर्न माग गर्दै अभियान चलाइएको छ ।